यी राजा जाे मोटर मेकानिकका रूपमा काम गर्छन्
यी राजा जाे मोटर मेकानिकका रूपमा काम गर्छन्, स्काइपबाट चलाउँछन् शासन
प्रकाशित मिति: बुधबार, भाद्र ०१, २०७३ समय: ३:१४:३६
काठमाडौं, एजेन्सी । शीर्षक पढेर पक्कै पनि विश्वास लागेन होला ? राजाजस्तो व्यक्तिले पनि मोटर मेकानिकको काम गर्छ र कतै ? राजा भन्नेबित्तिकै त सुखसयल र विलासी जीन्दगी बिताउने मान्छे पो भन्ने सोच्नु हुन्छ होला तपाईंले । तर अफ्रिकामा एकजना ६७ वर्षीय राजा छन् जसले साँच्चिकै मोटर मेकानिकको काम गर्ने गर्छन् ।
डेली मेलमा प्रकाशित समाचार अनुसार, सिफ बन्साह नाम गरेका यी राजाले जर्मनीमा कार मेकानिकको काम गर्छन् । उनले स्काइपबाट कुराकानी गरेर शासन चलाउने गरेका छन् । घानाको होहोइ क्षेत्रका राजा बन्साहलाई उनका हजुरबुवाले मेकानिकको तालिम लिन सन् १९७० मा जर्मनी पठाएका थिए । २ लाख आबादी भएको उनको राज्यका बासिन्दाले उनलाई नै राजा मान्ने गर्छन् । राजाको हैसियतले उनले जर्मनीबाटै शासन गर्दछन् ।
जर्मनी गएपछि बिहा गरेर सुखी जीवन बिताएका बन्साहलाई सन् १९८७ मा एउटा पत्र प्राप्त भयो । पत्रमा उनका हजुरबुवाको मृत्यु भएको र आफ्नो संरक्षण गर्न हजुरबुवाकै राजाको भूमिका निर्वाह गर्न अनुरोध गरिएको थियो । त्यसपछि बन्साहले पूर्णसमय मेकानिक बनेपनि आफ्नो होहोइ राज्यका जनताको सुखदुखको जिम्मेवारी लिँदै राजाको भूमिका निर्वाह गर्दै आएका हुन ।